Sir muujinaysa canshuura lala baxsaday - BBC Somali
Sir muujinaysa canshuura lala baxsaday
Dukumentiyo sir ah oo la helay ayaa tilmaamay in todoba iyo labaatan saraakiil dowladeed ah oo isugu jira kuwo haatan shaqeeya iyo kuwo hore ay xiriir qarsoodi ah la lahaayeen shirkad hawlaha sharciyada ka shaqaysa lagana leeyahay dalka Panama ay macaamiisheeda ka caawisay inay ku macaashaan lacago badan hab ay qawaaniinta cashuurta ku baal maraan iyo inay ka baxsadaan xeerarka caalamiga ah.
Dukumentiyadan oo wargays Jarmal ahi helay isla markaana BBC-du aragtay ayaa tilmaamaya in shirkadda Mossack Fonseca ay dad badan oo dunida daafaheeda jooga ka caawisay inay shirkado ka furtaan wadamada sida sahlan cashuuraha looga baxsan karo.
Qoraalladu waxay sheegayaan in Bankiyo Ruush ah oo xidhiidh la leh madaxweyne Putin, ay suurto galiyaan in la xawilo lacag dhan hal bilyan oo doolar.
Mossack Fonseca waxay sheegtay in shirkadaha dalka dibadda ay ka furtay si hufan u shaqeeyaan. Waxa kale oo ay sheegtay in ay ka xun tahay hadiiba adeegyadeeda sharci si aan haboonayn looga faa'iidaystay.